HGH Maka Ụmụ nwanyị - Ọgwụ mgbochi ịka nká na Thailand - HGH Thailand | Ụlọ ahịa ọgwụ Bangkok | USA
HGH Maka ụmụ nwanyị - Ọgwụ mgbochi Aging na Thailand
Ihe na-eto eto mmadụ na-enwe mgbochi megide ịka nká. Nsonaazụ nke nnwale ụlọ ọgwụ na Thailand. Na 1999, nationallọ Ọrụ Mba dị na Thailand banyere ịka nká ebipụtala otu n'ime ọtụtụ ọmụmụ ya dị mkpa dị mkpa na usoro iji ọgwụ dochie anya site na iji homonụ na-eto mmadụ (HGH).
Ebumnuche nke ọmụmụ a bụ ebumnuche ma ọ bụghị ịnwa igosipụta ịdị irè nke ọgwụgwọ hormone ka HGH, kama iji duzie ọmụmụ ihe ziri ezi nke ga-eme ka ihe ọmụma ahụike dịkwuo mma banyere iji HGH eme ihe na mgbochi. E kewara ndị na-amụ ihe ụzọ abụọ.
Otu nnwale ahụ nwetara injection nke HGH, mana otu ndị na-ahụ maka njikwa natara inje nke pilasi.
Ọmụmụ ihe abụọ kpuru ìsì banyere HGH
Ọmụmụ site na okike bụ ihe gbara okpukpu abụọ, yabụ ma ndị dọkịta ma ndị ọrịa amaghị onye natara inshots nke HGH, mana onye wụnye pipụ. Ọmụmụ ihe a bụkwa ihe omume mba nke gụnyere ụlọ ọgwụ si n'ofe Thailand.
Soro na ule ahụ, ma ndị ọrịa ma ụfọdụ nwere mgbaàmà nke ụkọ homonụ uto mmadụ. Otu ihe ihe omumu nke di omimi di omimi ma nwee ike inye otutu ihe kwesiri ntukwasiobi ikike ichoputa ihe di ala.
N’agbanyeghi na ihe omumu a bu nke a raara nye ogwu iji dochie anya mmadu jiri homonụ nke uto ya, oburu na odi nkpa, ndi oria natakwara testosterone, progesterone na estrogen.
Ebumnuche nke ọmụmụ a abụghị naanị igosipụta uru omume nke homonụ na-eto mmadụ na dịka homonụ ndị ọzọ, dị ka testosterone, progesterone na estrogen. Ọ bụ iji kwalite yana ike ọgwụgwọ nke inwetara HGH.
Dọkịta Thierry Hertoghe, bipụtara nnyocha ọmụmụ nke e nyere ndị ọrịa na-ahụ maka ụkọ homonụ mmadụ iji dochie anya ọgwụgwọ nke HGH.
Ndị ọrịa a nwere afọ ole ha dị. Onye ọrịa ndidi kachasị afọ 27 dị afọ na onye ọrịa kachasị okenye nke 82. Na nmalite ọmụmụ ihe ahụ, Dr. Hertoghe na ndị ọrụ ibe ya jiri nlezianya depụta ọnọdụ ndị ọrịa niile.
Mgbe ha gbasasịrị ọnọdụ ahụike nke ndị ọrịa ha, ha mere ọgwụ nnọchi nwoke na-anọchi anya HGH n'oge ọnwa abụọ. Achọpụtara Dr. Hertoghe na ndị ọrịa ya ma jụọ ha ka ha mejupụta nyocha nke ha zara banyere mmetụta ọgwụgwọ na-eji ajụjụ nyocha na-akọwa uru ha nwetara site na inje nke homonụ na-eto mmadụ.
Ihe ndị a bụ ndepụta nke ajụjụ niile na pasent nke ndị ọrịa zara ajụjụ na-egosi na ọnọdụ ha adịla mma.
Ihe ịrịba ama anụ ahụ nke erughi oke HGH na ịka nká:
- Mbelata nke wrinkles na ihu - 75,5%
Wrinkles bụ otu n'ime ihe ngosipụta kachasị nke ịka nká. Akpụkpọ ahụ na-amalite ịhapụ ịdị na-agbanwe ya ma jupụta ya ma guzobe ya dị ka ahịrị dị ọkụ na nke ọma. Onu ogugu ndi oria eritela uru site na inje nke uto uto ndi mmadu, gosiputara na HGH ewedala uzo di nma ma obu mee ka ihe mkpochapu ghara iru.
Inje na homonụ nke uto ndi mmadu nwere ike ime ka akwara nke akpụkpọ ahu mee ka ọ dị nro ma mee ka ike nke uru ihu ahụ dị, ha abụọ na-ekere òkè na mkpochasị nke wrinkles.
- Akpụkpọ anụ siri ike na olu na ihu - 67%
- More muscle siri ike bụ 60.7%
Ihe karịrị mmadụ isii n’ime ndị ọrịa iri agụnyere na nyocha nke Dr Hertoghe, n’ime ọnwa abụọ nke inshoction HGH, ụda olu gbanwere. Homonụ mmadụ na-eto eto nwere ike ịbawanye uru, dị ka ụda olu, na uru akwara site na-agbanwe ọdịdị mma nke uru ahụ na ike ha.
Ọ bụrụ na ndị ọrịa nwere ogo ahụike homonụ nke ahụ mmadụ, akwara na-enweta ike na mmanụ n'ụdị insulin-dị ka uto ihe metụtara 1, nke na-eme ka ahụ ike dịkwuo mma, karịchaa yana mgbakwunye na ụfọdụ mmega ahụ bara uru na nri.
- Oke ala nke abụba anụ ahụ - 48%
Ihe ruru ọkara nke ndị ọrịa sonyere n'ọmụmụ ihe a n'ihi injections HGH gbanwere ndepụta ahụ. Homonụ uto nke mmadụ na-arụ ọrụ dị mkpa na metabolism, nke metụtara nnọọ akwara na ntinye abụba anụmanụ n'ime ahụ, mana ọkachasị mgbe midsection.
Imeju na - atụgharị HGH ka ọ bụrụ IGF-1, ma nwee ikike ịkụda anụ ahụ na - adịghị ike ma gbanwee ya ka ọ nwee ike ọzọ!
- Akpụkpọ anụ gbara ọkpụrụkpụ, nke gbasiri ike ruo 34.5%
Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị zaghachirinụ chọpụtara mgbanwe dị ịrịba ama na ụda akpụkpọ ahụ. Ndị ọrịa a nwere mgbanwe n'ụdị akpụkpọ ahụ. Ihe si na ya pụta bụ nsogbu nke akwara na ịba ụba nke cell, ọ bụghị naanị akpụkpọ anụ na -akasị ahụ na -eme ka ọ pụọ n'anya, mana mgbanwe anụ ahụ ndị a na-enye aka na-eme ka ngbanwe na olu nke anụ ahụ dịkwuo elu.
Mkpụrụ ndụ anụ dị ka sel ndị ọzọ dị n’anụ ahụ chọrọ ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị. Mkpụrụ ndụ akpụkpọ ahụ adịghị iche. Ihe dị iche bụ na anụ ahụ bụ anụ ahụ nke na-ahụkarị maka mpụga mpụga, dịka ọkụ anyanwụ, okpomọkụ na ikuku.
HGH nwere ike ichebe akpụkpọ ahụ site na ihe ndị dị na ya ma gbochie akpịrị ịkpọ nkụ, nke na-enyere akpụkpọ ahụ aka ịdịgide adịgide, gbasie ike ma guzogide mmebi ahụ.
- Mmụba ntutu dịkwuo elu - 28,1%
Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị sonyere n'ọmụmụ ihe a nwere mgbanwe na ntutu ha n'ihi ikpughe homonụ na-eto mmadụ. Ọ bụ ezie na nsonaazụ a dị mma bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, akụkụ dị mkpa nke ndị weere ọgwụgwọ HGH, na-atụle ntutu dị mma karịa ọgwụgwọ.
Mgbe mkpụrụ ndụ akpụkpọ ahụ kwesịrị mmiri ma mee ka ọ dịghachi mma, ọ na-emekwa ka ahụike nke ntutu ghara isi ike. Isi ntutu bụ naanị ụdị dị n'ụdị akwara akpụkpọ ahụ ka ahụ ike anụ ahụ rụkwaara ọrụ ahụike nke ntutu isi. Iche iche na mmetụta ọgwụ germanosilicate iji ọgwụgwọ hormone, uto mmadụ
- Nnukwu mmụba na nguzozi mmetụta uche - 71,4%
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrịa nwere ọganihu na ọnọdụ mmetụta uche n'ozuzu ya. Enweghi ike nke homonụ na-eto uto nke ogologo oge mere ka mbelata ahụike ahụike yana nsonaazụ nke ọmụmụ a na-enyekwu ihe akaebe na ụkọ nke homonụ na-eto mmadụ nwere ike ime ka ahụike uche ka njọ.
Maka ọtụtụ ndị ọrịa, HGH nwere ike ime ka ndụ kwa ụbọchị bụrụ ihe a na-anabata na nke na-atọ ụtọ. Nke a bụ akụkụ ụfọdụ n'ihi mgbanwe nke echiche onwe onye na-esite na mgbanwe anụ ahụ na-eme na ahụ, mana HGH nwekwara ikike iji nyocha kachasị nke ụbụrụ!
- Mmụba ume - 86.8%
N'etiti ndị ọrịa na-esonye n'ọmụmụ ihe ahụ. Thierry, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 9 n'ime ndị ọrịa 10 ọ bụla nwere ụba ike. Imirikiti ndị ọrịa na-arịa ọrịa, enweghi ike HGH gosipụta ike ọgwụgwụ. HGH nwere ike ịkwalite ahụ, na-enyere You mụrụ anya ma dịkwuo njikere iwere ụbọchị. Homonụ na-eto mmadụ nwere ike nke a n'ọtụtụ ihe.
Otu n’ime ihe kpatara ya bụ na ọ na - eme ka ahụ anụ ahụ nwee ike ị nweta ihe kacha na - edozigharị n’ihi ụra. Ihe ọzọ kpatara ya bụ na mmebi nke abụba anụmanụ, dị ka ihe si na IGF-1, na-enye anụ ahụ ike dị elu na ọkwa kemịkal.
- Ubara anụ ahụ mụbara - 86,04%
- Ihe kariri 85% nke ndị zaghachiri na ule nyocha.
Thierry kọrọ na n'ihi nsonaazụ HGH siri ike ikike ime mmega ahụ na ịrụ ọrụ anụ ahụ. Homonụ na-eto mmadụ na-ekpughere ọkwa nke metabolism nke na-enye ike ume. Mmụba nke ume a na - eme ka ahụ nwee ike iguzogide oke arụ ọrụ na mgbakwunye na ojiji nke ọrụ a.
Ọzọkwa, usoro ọgwụgwọ nnọchi homonụ HGH na-abawanye ọnụego nke anụ ahụ na-agbake mgbe mgbatị ahụ na mmerụ ahụ. Jughaghachi ọrụ dị ukwuu n'oge ụra na-apụta na You nwere ike na-emega ahụ ike oge niile na-enweghị ike ọgwụgwụ.
- cangaghi-alaghari ura site na uru adighi nma - 82,5%
Usoro ọgwụgwọ idochi na homonụ na-eto mmadụ na-eme ka ahụ anụ ahụ nwee ike inweta ihe niile ọ na-ehi ụra. A na - ezobe HGH na nzuzo n'abalị ma nke a na - eme mgbe ahụ anụ ahụ gbakere na ike ọgwụgwụ, uwe na - agbakọ n'ehihie. Maka ndị ọrịa nwere oke HGH, ahụ anaghị ahụ uru zuru oke nke ụra ahụike ma mesịa na-ata ahụhụ ya.
Ọ bụ ezie na ndị kachasị baa uru kwesịrị ịnwe ụra n'abalị maka awa asatọ, ndị ọrịa nwere ọkwa HGH dị mma, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma karịa ụra dị ala. Na mgbakwunye, ndị ọrịa na-arịa nsogbu ụra ụra na-agafeghị oke, HGH nwere ike inye aka weghachi omume ụra dị mma, na-eweghachi ọdịdị nkịtị nke ahụ.
- Ikike kari iguzogide nchekasị - 83,7%
Gbanyere na: GoQuick na Bangkok, HGH Bangkok, HGH Thailand
Previous isiokwu HGH felata na Thailand | Jiri Genotropin maka ida abụba na Bangkok
isiokwu na-esonụ HGH Thailand - mụtakwuo banyere Hormone mmadụ na Bangkok
Ndewo, achọrọ m ịdebanye aha maka ọgwụgwọ HGH maka uto akwara, na -eche maka peptides maka ịkwalite mmepụta eke